Ngithenga kanjani i-backlinks ye-EDU?
Ngisemkhakheni we-Search Engine Optimization iminyaka, ngakho ngiyaqonda ukuthi i-backlinks ebalulekile neyenamandla kangakanani, ikakhulukazi uma kuziwa emkhankasweni wokwakha isixhumanisi. Ngezansi ngizokwabelana ngecebo elihle lokungazithengi i-backlinks ye-EDU, kodwa uzakhe ngokwakho ngaphandle kokuchitha idola. Ngaphambi kokuba sihlolisise lolu daba, ngizocacisa incazelo eyodwa nje encane okwamanje ebalulekile kakhulu.
Masibhekane nakho - awukwazi ukuthenga emuva emuva ama-backlink EDU. Yiqiniso, hhayi wena kuphela - app developemnt. Kungenxa yokuthi akunakwenzeka lapha ukuthola lokho okudingayo ngokukhokha imali edingekayo ngokubuyisela. Ngisho ukuthi kunokuba ngikutshele ukuthi ungathenga kanjani ama-backlinks e-EDU, ngizokukhombisa umhlahlandlela omfushane engangiwuthola ngempumelelo ngempumelelo izixhumanisi eziyigugu ezinyangeni ezintathu - ngisebenzisa nje izifundo.
Ukubhekela Abalaleli Abafanele
Ukukhomba izithameli eziqondiwe ezifanele ngokugcwele ngendaba yakho kuyinto ebaluleke kakhulu okumele yenziwe ngaphambi kwanoma yini enye. Vele uqiniseke ukuthi uhamba ngomzila oqondile kusukela ekuqaleni. Cabanga kahle mayelana nezilaleli zakho "ezilungile" ukubhekana nezilaleli ezifanele. Konke okudingayo ukugxila ohlelweni lwakho lokufundiswa kwabafundi abanentshisekelo, ngokuvamile baqala ukuqhuba amabhizinisi, ukukhangisa, nokukhangisa.
Ukudala ikhasi le-Scholarship
Lolu hlobo lokuqukethwe kulula ukuthuthukisa, nakuba uqinisekisa ukuthi konke kunendawo. Cabanga ngemininingwane elandelayo ebalulekile mayelana nekhasi lakho lokufundela:
yenza incazelo emfushane mayelana nenkampani yakho;
uthole ikhasi elisha lixhunyaniswe nekhasi lakho eliyisiqalo kanye namanye amanye amakhasi asemqoka adinga ukuthola ijusi lokuxhumanisa ngaphezulu;
usebenze kahle esigabeni sakho sokufaneleka, qinisekisa ukuthi uchaza abafakizicelo bakho ngokucacile nangokunokwenzeka ngangokunokwenzeka;
kuchaza inani lemali ye-scholarship oyithola engabizi ngesabelomali sakho (ngokuvamile endaweni ephakathi kuka $ 500 no-$ 1000), futhi ungafaki ukunikeza umvuzo owamukelekayo, noma ngeke ukhange noma iyiphi isikhungo semfundo eningi;
inikeza isigaba sesicelo nayo yonke imininingwane edingekayo (i. e. , ukuhanjiswa kwezinhlamvu ezifushane noma izimpendulo zevidiyo, izinsuku zokukhokha, izinsuku zokunikezwa), okumele kulandelwe ifomu lokuxhumana ekupheleni kwekhasi.
Into yukuthi amawebusayithi e-EDU awunalo uhlu olufanele ukuze afane nekhasi lakho lokufundela. Uma kufanele kwenzeke kanjalo, kunezindlela ezimbili ezihlukene zokucwaninga ngezixhumanisi - ngokuqondile nezinjini zokusesha zisebenzisa amathuluzi e-intanethi ukuhlola igunya lesikhulu, noma ukwandisa uhlu lwakho lokuxhumanisa ne-reverse engineering yamakhasi we-scholarship namanye amakhasi ewebhu abhekisela ku-dot EDU. Uma konke sekukhona, qinisekisa ukufaka yonke imininingwane kuspredishithi sakho esikhulu.
Ukuthola okungekho emthethweni
Ukukhomba umuntu oxhumana naye okuwukuphela kwendlela yokufinyelela kubasebenzi emakolishi nasemayunivesithi. Cabanga ukubeka ingxoxo efanele ngomyalezo olula olandelwa yi-imeyli, noma incwadi ye-imeyli ejwayelekile. Futhi, ungayenza ngokusebenzisa ifomu elijwayelekile elicela imininingwane yokuxhumana. Ngaleyo ndlela, kuyodingeka uthumele yonke imininingwane mayelana nesifunda sakho lapho uthola impendulo enhle ekolishi noma eyunivesithi. Emva kwakho konke, uma i-scholarship ithunyelwe, kufanele unikezwe isaziso. Kepha mina, ngenza le nqubo ibe lula ngokusebenzisa amathuluzi ambalwa ase-intanethi ukugcina ukuqapha kwe-backlinks.
Amaphuzu ambalwa amasha:
Qaphela ukuthi ama-backlink e-EDU anemibhalo efana ne-anchor ezayo njengeziqu eziqondile ze-scholarship, noma ama-URL azimele.
Zama ukuthola iwebhusayithi yakho ithunyelwe kuma-search engine aqondene ne-scholarship.
Qinisekisa ukuthi ubhekene nenkambo ethize futhi ehambisana nayo.
O kahle uyazi, imali ye-scholarship ayisho ukuthi uthengela emuva kwe-EDU, indlela ewukuphela kokubathola. Ngemuva kwalokho konke, kusengakapheli idoli elilodwa, akunjalo?